Mobile Phone Industry မှ အခမဲ့သင်တန်းတက်ခွင့် အခွင့်အလမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » Mobile Phone Industry မှ အခမဲ့သင်တန်းတက်ခွင့် အခွင့်အလမ်း
Mobile Phone Industry မှ အခမဲ့သင်တန်းတက်ခွင့် အခွင့်အလမ်း
Posted by manawphyulay on Jul 17, 2012 in Events/Fundraise | 10 comments
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပွင့်လင်းလာ၍ ကောင်းမွန်သော တိုးတက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်နေပြီဖြစ်ရာ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွင်လည်း တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ ခိုင်သစ္စာကုမ္ပဏီသည် Mobile Phone Industry တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရန်အတွက် အမှီအခိုကင်းသည့် အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဖြည့်ပေးမည့် သင်တန်းတစ်ခုကို အခမဲ့ပေးလိုပါသည်။
သင်တန်းစတင်မည့်ရက် = ၂၃၊ ၇၊ ၂၀၁၂
သင်တန်းကာလ = ၁ဝ ရက်
အတွေ့အကြုံရှိ၍ ကျွမ်းကျင်သော နိုင်ငံခြားပညာရှင်များမှ ပို့ချပေးပါမည်။
သင်တန်းနေရာ = Myanmar Engineering Society
သင်တန်းတက်ရန် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများ
– လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြေပြစ်သူ
– စိတ်အား ထက်သန်၍ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ
– အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှု ကျွမ်းကျင်ပါက ဦးစားပေး စဉ်းစားပါမည်။
– အသက် ကန့်သတ်မထားပါ။
သက်တန်းတက်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများသည် ၁၇၊ ၇၊ ၂၀၁၂ နှင့် ၁၈၊ ၇၊ ၂၀၁၂ ရက်နေ့များတွင်လည်း နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၆ နာရီအတွင်း အောက်ပါလိပ်စာသို့ လာရောက်၍ သင်တန်းလျှောက်လွှာများ ဖြည့်ပြီး လူတွေ့ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
အခန်း ၅၀၃၊ ခိုင်သစ္စာကုမ္ပဏီလီမီတက်၊ ၅ လွှာ၊ Sakura Tower, ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း ၂၅၅၄၅၈၊ ဝ၉၇၃၁၉၁၁၅၀၊ ၂၅၅၄၅၉
ကိုမတ်တို့ ကုမ္ပဏီများလား မသိဘူး .. အဟိ .. ။
အခွင့်ရေးကတော့ ဖရီး သင်ပေးတော့ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမယ့်လေ .. …တကယ်စေတနာနဲ့သင်ပေးတာလား …. အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေသွန်းတာလားဆိုတာတော့ …. ပြောဖို့ စောနေသေးတယ် …. ။ အားတော့နာပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်မက သံသယမျက်လုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုး …. ။ စီးပွားရေးသမားတွေက အကျိုးမြတ်မရှိလျှင် ရေတောင် အလကား မတိုက်တတ်ဘူးဆိုတာမျိုး .. မြင်ခဲ့ဖူးလို့ပါ … ။
ကျနော်လည်း သည်သတင်း ကို ပိုပြီး ဒီတေးလ်လေးတော့ သိချင်သားဗျာ…\_
>>>>ခိုင်သစ္စာကုမ္ပဏီသည် Mobile Phone Industry တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရန်အတွက် အမှီအခိုကင်းသည့် အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဖြည့်ပေးမည့် သင်တန်းတစ်ခုကို အခမဲ့ပေးလိုပါသည်။<<<<
အကျိုးဆောင်(ပွဲစား) ဖြစ်မယ့် သင်တန်း ပေါ့ …နော်..
ပွဲစားတောင် သင်တန်း တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဘောပေါ့နော်..
အင်း …ရှိုးရွမ်းက အရောင်းဝန်ထမ်း ပုံစံမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျို့ …
သတင်းကောင်းလေးပါဘဲမမရယ် တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့သတင်းလေးပါဘဲ ခုလိုသတင်းပေးတဲ့မမ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။။
ဝါသနာပါလို့ လေ့လာသင်ယူချင်တဲ့ သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာပါလို့ယူဆပါ၏။။။
မ မနောရေ စာရေးကောင်းသလို စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ သတင်းတွေ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
သတင်းလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမဲ့ Mobile မှာ ဘာ Subject ကို Specified လုပ်ပြီးသင်မှာလဲ
Engineering Society ကကော MIT ထဲကပာာလာ၊ဘယ်နားကလဲ။နိင်ငံခြားပညာရှင်ဆိုတာကကော
ဘယ်နိင်ငံကပါလဲခင်းဗျား။ ကုလားကြီးလားတရုတ်ကြီးလား? အကျိုးဆောင်ပွဲစားသင်တန်းလား
အိုင်တီသင်တန်းလား/နောက်ပြီး သင်တန်းပြီးရင် ဘာ Letter ဘာ Certificate ရမလဲသိချင်သေးတယ်ဗျာ
ဆက်ကြည့်ပါဦးရှင့်။ ဆက်လို့မရလို့ သေချာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆာကူရာတာဝါက ၅ ထပ်မှာ သွားရောက်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင်။